राष्ट्रवादको अचानोमा मोदीको तरबार
अभिषेक जोशी/ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमण बैशाख २८ गते जनकपुरबाट हुँदैछ । भ्रमण सफल बनाउन नेपाल सरकार सबै काम छोडेर तयारीमा जुटेको छ । मानौं कि एउटा किसानलाई असारे चटारो लागेको छ । नागरिक अभिनन्दन, जनकपुरमा गरिने स्वागत र मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि सबै व्यवस्था मिलाईएको छ । सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्रहरु ‘हाइ अलर्ट’ छन् ।
यतिबेला जनकपुर सिँगारिँदैछ; भत्केका धुलाम्मे सडक पिच हुँदैछन् । राजेन्द्र महतोमा अनौठो उत्साह देखिएको छ । उनको बुढो शरीरमा १६ वर्षे जवानी चढेको छ । नाकाबन्दी गर्दाको भन्दा सक्रियता कम छैन् । उनी आफैँ झाडु बोकेर सडकमा निस्केका छन् । उनका यी सबै कर्तुतमा भारतीय ‘भक्ति’ झल्कन्छ । यो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
पहिलो पल्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीले जनकपुर टेक्दै छन् । त्यस अर्थमा भ्रमण महत्वपूर्ण पनि छ । तर, जुन किसिमको ‘भक्तिभाव’ झल्काउन खोजिएको छ, त्यो एउटा स्वाभिमानी नेपालीलाई पच्ने खालको छैन् । वषौँदेखि जनकपुर कुरूप थियो, कसैले पनि यसका गल्लीहरू सफा राख्न जरुरी ठानेनन्, बरू भत्केका सडक र तिनले उडाउने धुलो देखाउँदै राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकियो । एकाएक अहिले जनकपुर बेहुली झैं सिँगारिएको छ । यो कसलाई देखाउन ?
मोदीलाई,जनकपुरबासीलाई कि ओलीलाई ?
मोदी जनकपुर भ्रमण सकेर काठमाडौँ आउनेछन् । त्यसपछि, मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जानेछन् । तर, काठमाडौँ टेक्दा सर्वसाधारण नेपाली जनताबाट उनले पहिला पाए जस्तो सम्मान पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । नाकबन्दीले कुँडिएको नेपाली मन अझै पनि स्थिर बन्न सकेको छैन् । मोदीले पछिल्लो पटक भुकम्पबाट थलिएको नेपाललाई मित्र राष्ट्रको रूपमा उपलब्ध गराएको निर्मम सहयोग–नाकाबन्दी–लाई नेपालीहरू भुलेका छैनन् । केहि दिन यता सीमामा एसएसबीले देखाएको दादागिरीबारे पनि काठमाडौँ जानकार छ । त्यसकारण, भ्रमणको क्रममा नागरिक तहबाट कुनै खालको विरोध नहोस् भन्नेतर्फ नेपाल सरकार निकै सचेत देखिन्छ ।
ओलीको ऐतिहासिक भारत भ्रमण सफल भएको महिना दिन नपुग्दै सीमामा निहत्था नेपाली नागरिकमाथि हतियारधारी एसएसबी जाईलाग्न थालेका छन् । तर राष्ट्रवादी भनिएको सरकार अचम्मसित मौन छ । के हिजोका केपी ओली र आजका केपी ओली भिन्दै व्यक्तित्व हुन् ? अनि के यस्ता विषयमा सरकार मौन रहन मिल्छ ? आप्mना नागरिकहरूको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील हुनु पर्दैन ? भारतीय आर्मीको विशेषम दस्ता ‘कमाण्डो’ फोर्सलाई हातहतियार बोकेर नेपाल छिर्ने अधिकार कसले दियो ? सरोकारवाला भारतीय पक्षसँग यस विषयमा हाम्रो सरकारले सोधीखोजी गर्ने कि नगर्ने ? यहि हो, नेपाल भारत सम्बन्धले प्राप्त गरेको नयाँ उचाई ? के अब, नेपालीहरुले आप्mनै जमिनमा बाटो बनाउन पनि भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने ? के अब आफ्नो कृषिबाली जंगली जनावरहरूबाट पनि जोगाउन नपाउने नेपालीहरू ले ? भारत नेपाल मित्रराष्ट्र भन्दै र सुन्दै आएको जुग बितिसक्यो । तर, वर्षाैँ पुराना सवालहरू आज पनि जस्ताका तस्तै छन्–हतियार देखाएर कसलाई तर्साईन्छ, शत्रुलाई कि मित्रलाई ? हतियारधारी सैनिक जत्थाले छिमेकी मुलुकका निहत्था नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गर्नु मित्रता हो कि शुत्रता हो ? अहिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालीहरूसँग सीमानामा जुन खालको व्यवहार गरिरहेको छ; त्यस खालको व्यवहार शत्रु राष्ट्रका नागरिकहरूसँग समेत गरिन्न । पाकिस्तान वा चीनसँग सीमा जोडिएका भुभागमा यहि भारतीय सुरक्षा बल विरालोको छेउमा परेको मुसा जस्तो बनेर बसेको छ ।
पाकिस्तानतर्फबाट अनेक पटक आतंकवादी हमला भए । भारतीय सैनिकहरु हताहत भए । तर पनि यिनीहरुले पाकिस्तानी भुभागमा घुस्ने आँट गर्न सकेनन् । सर्जिकल स्ट्राईक नामको एउटा झुट मीडियामा प्रचार गरिएको थियो; पाकिस्तानले खण्डन गरेपछि विश्व जितेको जस्तो रातदिन बहादुरीका गाना गाईरहेको भारतीय मीडिया चुप लाग्यो । सीमानामा गस्ती गर्दा गर्दै बाटो भुलेको बहानामा चीनियाँ सैनिक भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशभित्र हातहतियार बोकेर घुसेको घुस्यै हुन्छ र हरेक पटक सामान्य सोधीखोजी गरेर पछाडि हट्ने गर्दछ, भारतीय सेना । त्यहि सीमा सुरक्षा बल, नेपालको सीमानामा सिंहको रवाफ देखाउँछ । नेपालको सीमाभित्र जबरजस्ती घुस्छ र एक्ला दुक्ला रहेको नेपाली नागरिकमाथि बहादुरी झाड्छ । यसको मुख्य कारण खुला सीमाना पनि हो । जताबाट जतिखेर जसले जसरी पनि नेपाल छिर्न पाईरहेको छ । त्यसकारण, हरकसैको अनधिकृत आवागमन रोक्नको लागि नेपाल भारत सीमामा काँढेतार लगाउनु आवश्यक भईसकेको छ । काँढे तार नलगाएसम्म अन्य अपराधहरु नियन्त्रण गर्न सकिएला; भारतीय एसएसबीको दादागिरी नियन्त्रण गर्न सकिन्न ।
बढ्दो धार्मिक विवाद
वेलायत, नर्वे, स्वेडेन, डेनमार्क, नेदरल्याण्डस् आदि मुलुकले नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि विभिन्न आईएनजिओ मार्फत् अर्बाैँ रकम लगानी गरेको तथ्य अब गोप्य रहेन । मीडियाले पनि यतिखेर यस विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाईरहेको छ । किनभने, धर्म परिवर्तनको जुन चलखेल वितेका दश वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको छ, त्यसले समाजलाई नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने पक्कापक्की छ । त्यसकारण बेलैमा, त्यसको रोकथाम आवश्यक छ । यति हुँदा हुँदै पनि इसाईकरणका गतिविधीहरू सरकारी नियन्त्रणबाहिर गईरहेका छन् । दोलखामा उपराष्ट्रपति पुनः कै हातबाट पाठ्यक्रम वितरणको नाममा बाईबल वितरण गराउने दुस्साहस ईसाई मिसनरीले गरे । यसरी उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई धर्म परिवर्तन गराउने षड्यन्त्रमा दुरुपयोग गरिँदा समेत राज्यले दोषीहरुलाई कानुनी उपचारको दायरामा ल्याउन चाहेन । यसैगरी, चितवनमा एक जना हिन्दु दलित महिलालाई चर्चले बोक्सीको आरोप लगायो । भगवान शिवको फोटो सार्वजनिक स्थानमा जलायो । यस काण्डले विकट रुप लिएपछि, प्रहरी प्रशासनको अग्रसरतामा त्यस चर्चमा तालाबन्दी गरियो । काठमाडौँ मै कलंकी जस्तो व्यस्त क्षेत्रमा माईक समातेर सुसमाचार सुनाईरहेका ईसाई मिसनरीहरुलाई स्थानियले भगाउनु परेको थियो ।
माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरु राष्ट्रवादी सरकारमाथि कसिला व्यङ्ग्य हुन् । किनभने ओलीले भने–भारत भ्रमण ऐतिहासिक भयो । अब नेपाल भारत सम्बन्धले नयाँ उचाई पायो । तर महिना दिन नबित्दै सीमामा भारतीय एसएसबीले दादागिरी सुरु गरे । सामान्य मानवीयताको समेत ख्याल नराखी नेपालमाथि लगाईएको नाकाबन्दी बिर्सेर नेपाल सरकार नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन गर्ने तयारीमा जुट्दैछ । आईएनजिओको आडमा भईरहेको धर्म परिवर्तनको व्यापार ठप्प पार्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी गर्दैछ तर मिसनरीहरु उपराष्ट्रपतिकै हातबाट बाईबल वितरण गराईरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बोली, सरकारको गृहकार्य तथा कार्य र योजनाहरुबिच कतै पनि तादम्यता भेट्टाउन सकिएको छैन् । सुनकाण्ड र सिण्डिकेट तोड्ने सवालमा गृहमन्त्री बादल र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गरेको जबरजस्त प्रयासलाई बिर्सिदिने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार विगतका सरकारहरू भन्दा पृथक देखिएको छैन; यहाँसम्म आईपुग्दा । किनभने पानी जहाज र रेलको अभावमा पनि नेपालले समृध्दि हासिल गर्न सक्छ तर धार्मिक द्वन्द्वको आगो एकपटक सल्कियो भने त्यसपछि मुलुक तङ्ग्रिन नसक्ने गरी थला पर्नेछ । यस्तो खालको राष्ट्रवादले मोदीको तरबारको प्रहारलाई कति दिन थेग्ला ?
प्रकाशित २५ बैशाख २0७५ , मङ्गलबार | 2018-05-08 10:46:37